Beddelka ugu fiican ee Photocall TV | Androidsis
Beddelka ugu fiican ee Photocall TV
DaniPlay | 30/04/2021 10:14 | Codsiyada Android
Photocall TV ayaa maanta ka mid ah bogagga oo isu keena wax ka yar seddex qaybood oo qaar ka mid ah 1.000 kanaalka DTT ee heer qaran iyo heer caalami ah iyo adeegyada lacag-bixinta. Websaydhkani shaki la’aan wuu dhammaystiran yahay, marka lagu daro inuu leeyahay astaamaha telefishanka ee tooska ah wuxuu kaloo ku darayaa idaacado iyo hage barnaamij.
Xaqiiqdii maahan adeegga khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee DTT ee bilaashka ah, waxaa jira kuwo aad u tiro yar oo la mid ah oo leh hawlgal la mid ah Photocall TV. Waxaan muujineynaa beddelka ugu fiican ee Photocall TV, Maaddaama ay jiraan bogag wanaagsan oo lagu arko calaamadaha nool iyada oo aan loo baahnayn in barnaamijyada lagu soo dejiyo taleefanka ama kombuyuutarka.
5 TV Spain
6 Telefishanka Fomny
7 Daawo TV-ga
Waa bog sii kordhaya oo bixiya wadarta 60 kanaal oo ka kooban waxyaabo bilaash ah, dhammaantood waxay ku amreen qaybo si loo helo kan aan raadineyno xilligaas saxda ah. Qaar ka mid ah qeybaheeda ayaa ah kanaallada guud, mowduucyada carruurta, cayaaraha, wararka iyo kanaalada gobolka.
Intaa waxaa dheer, Vertele Online waxay leedahay wadiiqooyin isboorti oo idaacadeed loo tixgeliyo inay yihiin kuwo lacag la siiyay, dhammaantoodna waxay la shaqeeyaan Fubo TV, mid ka mid ah bogagga loo yaqaan baahinta dhammaan noocyada isboortiga. Waa bedel weyn oo loo yaqaan 'Photocall TV'Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah inaad gujiso sawirka ka dibna aad hoos ugu degto xiriiriyaha sheegaya, tusaale ahaan, "Eeg Antena 3 Live."
Sababtoo ah noocyada kala duwan ee kanaalka, waa sharad muhiim ah kuwa laga heli karo internetka si aad u daawato telefishanka khadka tooska ah adigoo gujinaya sawirka kanaalka. Waxay adeegsaneysaa YouTube markay timaado bixinta sawirro xayawaan ah oo taxane dhammaystiran leh, oo muhiim u ah carruurta yaryar ee guriga joogta.
Teleame wuxuu khadka ka jiray muddo dheer, waxyaabaha ku jira aad bey u kala duwan yihiin maaddaama ay leedahay astaamo toos ah oo ka socda telefishannada kala duwan ee dalalka sida Chile, Kolombiya, Mareykanka oo ay u kala qeybsan yihiin qaaradaha. Waxay leedahay noocyo badan oo kala duwan, marka lagu daro mowduucyo kala duwan si aadan u caajisin maalinta oo dhan.
Waxay muddo dheer ahayd ikhtiyaar aad ufiican in la daawado telefishanka dhulka ee dhijitaalka ah (DTT) Iyadoo loo marayo webka, waxay kaloo leedahay codsi u gaar ah oo looga daawado taleefanka gacanta. Kanaalka TDT wuxuu bixiyaa qadar hufan oo ah kanaalo telefishan oo bilaash ah, dhanka kalena wuxuu ku darayaa idaacadaha internetka.
Waxaa laga daawan karaa kombiyuutar kasta oo leh xiriir internet ah, muhiim ma noqon doonto in la yeesho xawaare aad u sarreeya si loo daawado telefishinnada hadda socda. Xaqiiqda togan ayaa ah inay leedahay boqolaal kanaalWaxay sidoo kale cusbooneysiineysaa si loo daboolo waxyaabo badan oo badan oo loogu talagalay menu-ka weyn ee ay bixiso.
Markaad gasho, waxay ku tusaysaa liiska kanaallada la heli karo si aad u aragto mid kasta oo ka mid ah si toos ah, sidaa darteed waa inaad kaliya dhagsataa kanaalka oo aad bilowdaa baahinta. Kudar khadadka qaran iyo kuwa maxalliga ah ee magaalooyinka qaarkood, marka laga reebo ku darista cayaaraha qaar.
Waxay ku leedahay mashiinka raadinta dusha sare si ay si dhakhso leh ugu hesho kanaalka, ma laha menus ay ku amarto kanaallada waana kan kaliya ee lagu dari karo. Beddelka xiisaha leh ee loo yaqaan 'Photocall TV' oo waxay dhacdaa inay ka mid noqoto kuwa ugu da'da weyn ee bixiya tv-ga khadka tooska ah ee bilaashka ah.
> TV Pluto
Pluto TV wuxuu yimid 2020 isagoo ah ikhtiyaar muhiim u ah telefishanka internetka oo leh wadiiqooyin noocyadooda kala duwan ah, oo ay ku jiraan xoogaa guri-guri ah. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad awood u yeelatid inaad si taxadar leh u daawato taxanaha, isboortiga iyo filimada, dhammaantoodna aan lahayn xayeysiis, in kastoo qaarkood ay ku jiraan.
Waxa ugu fiican ayaa ah barnaamijka maalinlaha ah ee barxadda, marka laga reebo inay leedahay fiidiyoow dalab ah, waxaad daawan kartaa filimada, taxanaha iyo dokumenteriyada nooc kasta adigoo gujinaya mid kasta oo daboolka ah. Pluto TV waa ka madax banaan yahay bixitaanka waana la cusbooneysiiyaa xilliyo si loo bixiyo nuxur tayo leh.
Sida bogagga kale, waxay leedahay kanaallo DTT ah oo Isbaanish ah wuxuuna diiradda saaraa iyaga si ay u bixiyaan wararka hadda jira, filimada, silsiladaha, cayaaraha iyo kuwa kale ee xiisaha guud leh. Adiga oo gujinaya sawirka mid kasta, kanaal kasta waxaa laga arki doonaa isagoo nool oo aan lahayn nooc goyn ah.
Waxa kale oo ay toos ugu dartaa kanaalada qoraal ahaan, halka ay sidoo kale ku samayso idaacadaha, oo ku habboon in si toos ah loo dhagaysto mid kasta oo iyaga ka mid ah. Waa bog qumman haddii aad rabto inaad aragto kanaallada qaranka iyo ismaamul kale oo ka mid ah beel kasta.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada tooska ah looga daawado telefishanka bilaashka ah, oo ku habboon xawliga degdegga ah ee bogga iyo sida loo eedayn karo ayaa ah inay leedahay xayeysiin faragelin badan leh. TV-ga Fomny, marka lagu daro kanaalada caadiga ah ee DTT, wuxuu leeyahay liis dheer, oo ay ku darsanayaan kanaallo caalami ah.
Si aad u aragto mid kasta, dhagsii sawirka kanaalka, adiga oo kuu qaadaya tabinta tooska ah ee daaqad kale, maadaama ay muhiim tahay in sidaas lagu sameeyo kanaalkan. Haddii aad doorato, tusaale ahaan kan Spain, wuxuu ku tusi doonaa dhammaan kanaallada la heli karo dalkan, iyo sidoo kale haddii aad gujiso dalal kale waxay ku siin doontaa natiijooyin kale.
Waa ikhtiyaar dhab ah sida Photocall TV, waxay aad ugu egtahay barta marka laga hadlayo bixinta calaamadaha DTT ee heer qaran iyo heer caalami ah. Waxa ugu fiican ayaa ah in lagu kala sooco qaybo, tan koowaad ayaa siineysa kanaalada Isbaanishka DTT, dokumentiyo, kartoonno, iyo sidoo kale kuwa kale.
Waxaa ku jira sheeko bilaash ah si loola hadlo martida kale ee bogga, taas oo ka dhigaysa mid isdhexgal ah haddii aan rabno inaan wadaagno dhadhankeena. Verlatele wuxuu shaqeynayay waqti dheer waana la cusbooneysiinayaa kanaallada kala duwan ee soo muuqda toddobaadyada kala duwan.
Liiska kanaalka, in kasta oo aanu ahayn kan ugu ballaadhan, si fiican buu u shaqeeyaa ahaanshaha mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan ee la isku xiro. Ku dar qaar ka mid ah kuwa xiisaha leh si aad u daawato filimada, silsiladaha, dokumenteriyada iyo taxanaha carruurta oo ay aad u aqoonsan yihiin carruurta guriga ku jirta, oo ay ku jiraan Disney Channel.
Waxay u shaqeysaa si la mid ah kuwa kale, adigoo gujinaya sawirka waxayna kugula talinayaan isticmaalka Adblock si aad nolol uga sameysato xayeysiiska kujira bogga. Liisaska ayaa la waayey, iyo sidoo kale kanaalada kale ee DTT Isbaanishka, in kasta oo ay fuliso ujeeddada siinta kanaallada caalamiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Beddelka ugu fiican ee Photocall TV
samee Toddobaadyada 2
Taasi TDTChanniyadu ma laha kanaallo badan? Sertio ahaan? Tifaftiraha warka, Daniplay, ayaa iskiis u qoray si uu u tijaabiyo codsigiisa? TDTChannels waa mashruuc iskaa wax u qabso ah oo isku duba ridaya xiriiriyeyaasha TV.s laftoodu ku daabacaan boggooda internetka Waxaa la cusbooneysiiyaa dhowrkii maalmoodba mar waxayna leedahay boqolaal kanaal oo u dhexeeya raadiyaha iyo telefishanka. Qof kasta ayaa iskaashi ka sameyn kara adoo siinaya xiriirka dadweynaha. Waa sharci 100%
Waan ku qaldanaa nooca webka, waan isku dayay oo nooca TDT Channels ayaa ah midka aan ugu dambayntii kaga tagay aaladdayda maxaa yeelay waxay lahayd boqolaal kanaal. Daawud David.
Waad ku mahadsan tahay daabacaadda kugula talineysa webka telegratis.org, aniga ayaa ah maamulka shabakadda la yiraahdo. Waxaan ka shaqeyneynaa bixinta ugu fiican ee webka iyo dabcan annaga oo aan ka dhexgelin xayeysiinta dhibta leh, in kasta oo aan dhaheyno waxay joojinayaan adblock ma isticmaaleyno qoraal xannibaya kuwa isticmaala. Waxaan ka shaqeyn doonnaa inaan bixino kanaallo badan oo ka socda Isbaanishka iyo in ka badan Latin America tan iyo markii mashruucu diiradda saaray saarista kanaallada Mareykanka.
6-da kulan ee fikirka fiican ee Android